असफल भए क्वारेन्टाइन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
असफल भए क्वारेन्टाइन
अत्यावश्यक सुविधा त छैन नै, त्यसमाथि बाढी र डुबानको समस्या, सर्पको डर, संक्रमणको जोखिम बढी, बलत्कार र मृत्युका घटनासमेत भएका कारण मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा बस्न नमानेपछि स्थानीय निकायले घरमै बस्ने अनुमति दिन थालेका छन् । सयौं क्वारेन्टाइनका एक लाखभन्दा बढी शय्या अहिले खाली भइसकेका छन् ।
काठमाडौँ — विदेशबाट आउनेहरु सिधै घर जान थालेपछि कोरोना संक्रमित भए/नभएको थाहा पाउन परीक्षण अवधिभर अलग्गै राख्ने विधि (क्वारेन्टाइन प्रणाली) नेपालमा असफल देखिएको छ । भद्रगोल व्यवस्थापनका कारण क्वारेन्टाइनबाटै संक्रमण फैलिन थालेपछि र क्वारेन्टाइनमा बसेकाको मृत्यु हुने क्रम पनि बढेपछि सुरुदेखि नै आलोचित बनेका सयौं क्वारेन्टाइनका एक लाखभन्दा बढी शय्या अहिले खाली भएका छन् ।
बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका-६ मा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइन तस्बिर : प्रतीक्षा काफ्ले/कान्तिपुर
एक साताअघिसम्म मानिसले भरिभराउ क्वारेन्टाइनको खर्च व्यवस्थापनसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा स्थानीय पुगेका थिए । यही बेला बाढीदेखि सर्पको डर, तीव्र संक्रमण वृद्धि तथा मृत्युका घटनाका कारण मानिस क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार नभएपछि स्थानीय निकायले घरमै बस्ने अनुमति दिएका छन् ।
खासगरी भारत र अन्य देशमा संक्रमण बढ्न थालेपछि घर फर्किएका लाखौं नेपाली राख्नका लागि रातारात बनाइएका क्वारेन्टाइन खाली भइरहेकै बेला देशभित्र कोरोना पोजिटिभको संख्या भने तीव्र गतिले बढोत्तरी भइरहेको छ ।
प्रदेश ५ मा ४५ हजार बेड खाली
एक महिनाअघि जेठ १४ मा प्रदेश ५ का ११ सय २१ क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या ३३ हजार ५ सय ६ थियो । शनिबारसम्ममा क्वारेन्टाइनको संख्या बढेर १८ सय १ पुगेको छ । तर, बस्नेको संख्या घटेर १५ हजार ५२ मा सीमित भएको छ ।
भारतबाट धमाधम नेपाली फर्कन थालेपछि अत्तालिएको प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई वडा तहसम्मै क्वारेन्टाइन स्थापना र व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको थियो । स्थानीय तहमा धमाधम क्वारेन्टाइन निर्माण पनि गरियो । तर, व्यवस्थापन राम्रो हुन नसक्दा क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या घट्यो । वडाले अधिकांश क्वारेन्टाइन विद्यालयमै निर्माण गरेको थियो, जहाँ बिजुली, खानेपानी, शौचालयदेखि इन्टरनेटको असुविधा थियो । गर्मीको समय भएकाले लामखुट्टेको समस्या पनि उस्तै थियो । त्यसले वडाध्यक्षसँगको पहुँच र राजनीतिक दबाबकै कारण धेरै सर्वसाधारण होम क्वारेन्टाइनमै बस्ने गरी घर जान थालेपछि अहिले ५० प्रतिशतभन्दा बढी क्वारेन्टाइन खाली भएका हुन् ।
गत जेठ १४ सम्म प्रदेश ५ का १२ जिल्लामा क्वारेन्टाइनको बेड संख्या ३८ हजार ४ सय ३९ थियो । शनिबारसम्ममा प्रदेशमा बेड संख्या ५९ हजार ६ सय ५० पुगेको छ । तीमध्ये १५ हजार ५२ बेड प्रयोग भएका छन् भने ४४ हजार ५ सय ९८ बेड खाली छन् । सबैभन्दा बढी बेड कपिलवस्तुमा निर्माण गरिएको थियो । यहाँका क्वारेन्टाइनमा १० हजार ३ सय १० बेड रहेकामा शनिबारसम्म ३ सय ८८ जना मात्र छन् । कपिलवस्तुबाट मात्र १० हजार ७ सय ४७ जना आरडीटी परीक्षण गरेर घर फर्केका छन् । बाँकेका क्वारेन्टाइनमा ६ हजार ७६ बेड निर्माण गरिएकामा अहिले ५ हजार १ सय ८८ बेड खाली छन् । बाँकेमा दुई साताअघिसम्म पनि झन्डै ७ सयलाई बेड अभाव थियो । रूपन्देहीमा ४ हजार २ सय १७ बेड खाली छन् ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका कोभिड–१९ फोकल पर्सन डा. उमाशंकर चौधरीले पछिल्लो चरण आरडीटी परीक्षण गरेर धेरै जना होम क्वारेन्टाइनमै बस्ने गरी घर फर्केपछि बेड खाली भएको बताए । ‘लक्षण नदेखिएपछि क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि अहिले क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या घट्दो र होम क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या बढ्दो छ ।’ भारतबाट स्वदेश फर्कने क्रम रोकिए अबको एक महिनामा सबै क्वारेन्टाइन खाली हुने अवस्था रहेको उनले बताए । प्रदेश ५ मा ३ हजार ४ सय ३९ जना संक्रमित छन् । तीमध्ये १ हजार ६ सय ३७ जना निको भएर घर फर्केका छन् । ११ जनाको मृत्यु भएको छ ।
अहिले आइसोलेसन सेन्टरमा लक्षण भएका कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या बढिरहेकाले समुदायका लागि चिन्ताको विषय भएको बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालका फोकल पर्सन डा. सुदर्शन थापाले बताए । ‘आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बसेर लक्षण नदेखिए निको भएको मान्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर सिधै घर पठाउनाले संक्रमण समुदायमा फैलिने बाटो खुल्छ ।’
बिरामीका लागि छुट्टै कोठा र शौचालय सबै घरमा उपलब्ध नभएको उनले बताए । यस्तो बेला क्वारेन्टाइनमा नराखी घर पठाइएका व्यक्तिको अनुगमन कसले गर्ने भन्ने पनि प्रश्न उठेको उनले बताए । यसका साथै संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको छिटो पीसीआर परीक्षणमा उनले जोड दिए । ‘परीक्षणमा ढिलाइ गरे संक्रमण समुदायमा फैलिनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि लक्षण भएका बिरामी बढनेछन् ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर १५ औं दिनमा आरडीटी परीक्षण गरेर घर पठाउने निर्देशिका लागू गरेपछि अधिकांश क्वारेन्टाइन खाली भएका हुन् । अहिले एकै दिन ४०/५० जना क्वारेन्टाइनबाट फर्किरहेका छन् । भेरी अस्पताल नेपालगन्जका कोरोना स्रोत व्यक्ति तथा फिजिसियन डा. संकेतकुमार रिसालले आरडीटी परीक्षण बढाइएकाले नेगेटिभ रिपोर्ट आएका व्यक्तिहरु घर फर्किने गरेको बताए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार हामीले काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘कोरोनाको लक्षण देखिएका व्यक्तिहरुको मात्रै पीसीआर गर्ने निर्देशिकामा छ ।’ क्वारेन्टाइनबाट बाँकेका ९ हजार ६ सय ५ जना घर फर्किसकेका छन् । आइसोलेसनमा राखिएका ३ सय १८ मध्ये ३५ जना मात्रै घर फर्किन बाँकी छन् ।
कर्णालीका क्वारेन्टाइन पनि रित्तै
कर्णाली प्रदेश सरकारले चैत ७ गते वीरेन्द्रनगरमा १ हजार बेडको क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय गर्‍यो । तीमध्ये ४ सय बेडको जिम्मा सेनालाई दिइयो तर २ सय १० बेड मात्र सञ्चालनमा आएका छन् । अहिले उक्त क्वारेन्टाइनमा ६८ जना बसिरहेका छन् ।
संक्रमित मुलुक र देशका अन्य क्षेत्रबाट आउनेलाई राख्न कर्णालीमा बनेको व्यवस्थित क्वारेन्टाइन यही एउटा हो । अन्य क्वारेन्टाइनहरु सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहले विद्यालय वा क्याम्पसमा सञ्चालन गरेका छन् । ती क्वारेन्टाइनको भद्रगोल अवस्थाले मान्छेहरु भाग्ने, उपचार नपाएर भित्रै मृत्यु हुने र कोरोना संक्रमण फैलिने केन्द्र पनि बन्न पुगेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका अनुसार प्रदेशका ९ सय ८४ स्थानमा ४३ हजार २ सय ५५ बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन छन् । हालसम्म ६२ हजार ४ सय ५३ जना व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बसेर आफ्नो घर फर्केका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले शुक्रबार आफ्नो वेबसाइटमा गरेको अपडेटअनुसार अहिले ६ हजार ७ सय ६६ जना व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् । निश्चित समय अवधि पूरा गरेर आरडीटी वा पीसीआर परीक्षणपछि उनीहरुलाई घर पठाएको कार्यालयका उपसचिव हेमबहादुर रानाको भनाइ छ ।
लकडाउन सुरु भएयता कर्णालीमा भारतबाट ४८ हजार ११ जना व्यक्ति आएका छन् । २ सय ७५ जना तेस्रो मुलुकबाट आएका छन् । भारतबाट आउनेमा सबैभन्दा बढी दैलेखका छन् । जेठ महिनामा मात्र त्यहाँ करिब १२ हजार व्यक्ति आएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाइ छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलका अनुसार दैलेखमा संक्रमण बढ्नुको एक कारण क्वारेन्टाइनको अस्तव्यस्तता पनि हो । ‘भारतबाट मान्छेको ओइरो लाग्न थालेपछि एउटै कोठामा २०–२५ जनासम्म राख्नुपर्‍यो, बेन्च र टेबुलमा पनि सुत्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘बरु घरमै गएर सावधानीका साथ बस भनेर पठाइदिएको भए यस्तो अवस्था आउँथेन कि ?’
आइतबारसम्म कर्णालीमा १ हजार ४ सय २८ जना संक्रमित देखिएमा दैलेखमा मात्र ७ सय ६० जना रहेका छन् । दुल्लुका नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारी सुरुवाती चरणमा भारतबाट आउनेलाई व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गरिए पनि पछि संख्या अधिक भएपछि व्यवस्थापनमा चुनौती भएको बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारले सुरुमा भारतबाट आउनेलाई सुर्खेतको क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरे पनि संख्या अत्यधिक हुँदा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै व्यवस्थापन गर्न भनेको थियो । यसले गर्दा स्रोतसाधन न्यून भएका स्थानीय तहलाई थेग्न हम्मे भयो । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणु आचार्य भन्छिन्, ‘प्रदेश सरकारले सहयोग गर्दैन, हामीसँग स्रोतसाधन छैन, जेजस्तो हुन्छ, मिलाएर बसाल्ने गरेका छौं ।’ प्रदेश प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका भएकाले बाहिरबाट आएका मान्छेहरुलाई पनि राख्नुपरेको उनले बताइन् ।
गण्डकीमा पनि आधाभन्दा बढी खाली
लकडाउन सुरु हुनसाथ गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन बनाउन होड चल्यो । विद्यालय, सामुदायिक भवन तथा स्वास्थ्य संस्थामा बनाएका क्वारेन्टाइन लकडाउनको दुई महिनासम्म पनि खासै प्रयोगमा आएनन् । पछिल्लो समय भारत र अन्य मुलुकबाट फर्किएकाहरु बढेपछि क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरु पनि बढेका छन् ।
क्वारेन्टाइन निर्माणसँगै बेड, सरसफाइका सामग्री, औषधि, खाना, खाजाखर्च स्थानीय तहले व्यहोर्दै आएका छन् । तर क्वारेन्टाइनमा धेरैजना एकै ठाउँमा खाँदेर राख्दा औचित्यहीनजस्तै बनेका छन् । व्यवस्थित नहुँदा क्वारेन्टाइनबाटै कोरोना संक्रमण फैलिएको सार्वजनिक भइसकेको छ ।
गण्डकी प्रदेशभरि आइतबारसम्म ११ हजार १ सय ३४ क्वारेन्टाइन बेड छन् । तिनमा ४ हजार ९ सय ३४ जना बसेका छन् । सबैभन्दा बढी बाग्लुङमा १७ सय ८६ बेड मध्ये १४ सय ८१ जना बसेका छन् ।
कास्कीमा १४ सय १४ बेडमा २ सय ९३, गोरखामा १ हजार ३७ बेडमा ३ सय ७५ जना बसेका छन् । पूर्वी नवलपरासीमा १६ सय ६८ बेडमा ४ सय, तनहुँमा ९ सय ९३ बेडमा ८ सय ९, पर्वतमा ९ सय ७२ मा ४ सय २६, म्याग्दीमा २ सय ७८ मा १ सय, स्याङ्जामा १५ सय ५० बेडमा ८ सय ६ जना बसेका छन् । मुस्ताङमा १ सय १७ बेड भए पनि कोही छैनन् । लमजुङमा १२ सय २६ बेडमा २ सय ४३ र मनाङमा ९३ बेड क्वारेन्टाइनमा एक जनामात्रै बसेका छन् ।
स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनको संख्या बढाएर आवश्यक तयारी गरेको र कास्कीको हकमा सोहीअनुसार विदेशबाट वा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाका व्यक्ति नआएकाले कम बसेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख बाबुराम आचार्यले बताए । पर्वत जिल्ला प्रशासनका सूचना अधिकारी घनश्याम गौतमले पछिल्लो समय भारतलगायतबाट आउनेको संख्या कम भएकाले पनि क्वारेन्टाइनमा कम बसेको बताए ।
प्रदेश २ मा होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने बढे
कोरोना संक्रमणको हटस्पट बनेको प्रदेश २ मा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन फितलो भएपछि अहिले होम क्वारेन्टाइनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टाइनमा खाना, बस्न–सुत्न, शौचालय र अन्य आधारभूत सुविधा नहुँदा त्यहाँ बस्नेहरु सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।
भारत र अन्य मुलुकबाट घर फर्किनेको संख्या पातलिएको र होम क्वारेन्टाइनलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले क्वारेन्टाइन रित्तिँदै गएको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ । तर, क्वारेन्टाइनमा थुनुवाको जस्तो व्यवहार गरिएको र एउटा संक्रमणबाट बच्न बसिएको क्वारेन्टाइनमा अन्य रोगको सिकार हुने दुरअवस्था रहेको गुनासो छ । प्रदेश २ सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले एउटा, क्वारेन्टाइनमा बसेकाको जाँचको रिपोर्ट धमाधम आएपछि पोजिटिभ हुने आइसोलेसनमा र नेगेटिभ आउने घर फर्किएको बताए ।
प्रदेश २ को ८ वटै जिल्लामा क्वारेन्टाइनको संख्या ५ सय ८१ छ । आइतबारसम्म क्वारेन्टाइनमा बसिरहेकाको संख्या ५३ सय ११ छ । होम क्वारेन्टाइनमा १७ सय ५२ जना छन् । सप्तरीमा मात्रै ११ सय १२ जना क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् भने सबैभन्दा कम बारामा ८४ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । प्रदेश २ मा शनिबारसम्म कुल संक्रमितको संख्या ३ हजार ५ सय ५४ छ ।
प्रदेश २ को रौतहट र सर्लाहीमा कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च छ । रौतहटमा ११ सय ७७ र सर्लाहीमा ६ सय १५ जना कोरोना संक्रमित छन् । करोडौं खर्च गरेर स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरिरहेको क्वारेन्टाइनमा भने १५ दिनसम्म बस्दा पनि स्वाब परीक्षण नभएको गुनासो पनि बढेको छ । प्रदेश २ का क्वारेन्टाइनहरुबाट हालसम्म ३१ हजार ८३ जना बसेर घर फर्किसकेका छन् । प्रकाशित : असार १६, २०७७ ०९:१७
जन्मेको ५ महिनामै बिहे, १७ वर्षमा घर निकाला
सानैमा बिहे गर्ने परम्पराअनुसार २०६० मै बुबाआमाले लगनगाँठो कसिदिए । १६ वर्षपछि गौना गरेर सञ्‍जीवले रञ्‍जुलाई अघिल्लो वर्ष घर भित्र्याए । तर, परिवारबाट अपहेलित हुँदै घरबाट निकाला गरिएपछि रञ्‍जु न्यायको खोजीमा छिन् ।
असार १६, २०७७ शिव पुरी
रौतहट — उमेर १७ वर्ष पुग्दै छ । बिहे भने जन्मिएको पाँच महिनामै भएको हो । अहिले उनको काखमा ६ महिनाकी छोरी छिन् । तर, परम्परागत रूपमा घर भित्रिएको एक वर्ष मात्रै भएको छ । गरुडा नगरपालिकाकी रञ्‍जु मलिक (डोम) श्रीमान् र सासूससुराले घरमा बस्न नदिएपछि अहिले घरनिकालामा परेकी छन् ।
रौतहटको गरुडा नगरपालिकाकी रञ्जु मलिक ६ महिनाकी छोरी बोकेर अधिकारकर्मी गुहार्दै । तस्बिर : शिव/कान्तिपुर
श्रीमान् सञ्जीव मलिक (डोम) र रञ्जुको २०६० सालमै बिहे भएको हो । त्यतिबेला सञ्जीवको उमेर डेढ वर्षमात्र थियो । यो समुदायमा सानैमा बिहे गर्ने चलन छ । बिहेको १६ वर्षपछि परम्पराअनुसार रञ्जुलाई गौना गरेर सञ्जीवले घर भित्र्याएका थिए । वर्षदिन नपुग्दै उनले छोरी जन्माइन् । घरबाट निकालिएपछि न्यायको खोजीमा छिन् ।
चन्द्रपुर–५ स्थित माइतीमा सरण लिएकी उनले न्यायका लागि अधिकारकर्मी गुहारेकी छन् । उनी बुबा शंकर मलिक र आमा संगीता देवीका साथ आइतबार चन्द्रनिगाहपुरस्थित महिला अधिकारकर्मी देवकी नेपालको घर पुगिन् । ‘५ महिनाकै उमेरमा छोरीको विवाह गरिदिएँ । अहिले नातिनी जन्मिएकी छ । ज्वाइँले घरमा राख्दिन भनेर निकालिदिए,’ शंकरले भने, ‘छोरीको न्यायका लागि अधिकारकर्मी, सुरक्षा निकाय गुहारेको छु । सानैमा विवाह गरेर भूल भयो ।’
घरमा श्रीमान्ले अर्को विवाह गर्छु भनेर निस्कन दबाब दिँदै आएको रञ्जुुले बताइन् । मानसिक तनाव दिने क्रम बढेपछि बाध्य भएर माइती आएर बसेको उनले सुनाइन् । सञ्जीवका बुबा लडाइले भने बुहारीलाई घरबाट ननिकालेको दाबी गरे । इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका डीएसपी ज्ञानकुमार महतोले केटा पक्षका परिवारलाई झिकाएर रञ्जुलाई न्याय दिलाइने प्रतिबद्धता जनाए ।
गरुडास्थित चिनी मिलमा रञ्जुका बुबा शंकर र सञ्जीवका बुबा लडाइ सँगै काम गर्थे । एक दिन लडाइले छोराको बिहेका लागि केटी खोज्नुपर्ने कुरा निकाले । शंकरले मेरी छोरी छ भनेर प्रस्ताव राखे । शंकरको प्रस्तावमा लडाइले समर्थन जनाए । जन्ती लिएर लडाइ शंकरको घर आए । केटाकेटी दुवैलाई अभिभावकले काखमै राखेर बिहे गरिदिए । त्यसबेला भोजभतेरमा एक लाख खर्च भएको शंकरले सुनाए ।
सानैमा बिहे भएकाले केटाले ठूलो भएपछि मात्र गौना गरेर केटी भित्र्याउने चलन छ । गएको वर्ष सञ्जीवले त्यसै गरेर रञ्जुलाई घर भित्र्याए । वर्ष दिन सम्बन्ध ठीकै चलेको थियो । जब बच्चा जन्मियो अनि छोरीमाथि कुटपिट र गालीगलौज सुरु भएको शंकर बताउँछन् । डोम समुदायमा दाइजो कम लाग्ने भनेर सानैमा बिहे गरिदिने चलन छ । उमेर नपुगी गरेकाले उनीहरूको विवाह दर्तासमेत हुन सकेको छैन । रञ्जु र सञ्जीवकै विवाह दर्ता नभएकाले छोरीको पनि जन्मदर्ता भएको छैन । सरकारले डोम समुदायका शिशुलाई स्थानीय तहमार्फत मासिक ४ सय रुपैयाँको दरले पोषण भत्ता दिँदै आएको छ । जन्मदर्ता नहुँदा उनी पोषण भत्ताबाट समेत वञ्चित छिन् ।
सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधिमा एउटै आमाबाट जन्मेका दुई जनासम्म बालबालिकाले पोषण भत्ता पाउने प्रावधान छ । बिहे र जन्म दर्ता नभएका कारण जिल्लाका करिब ५ सय डोम र मुसहर जातिका बालबालिकाले पोषण भत्ता पाउन नसकेको अनुमान छ । रौतहटको धमौरा, मौलापुर, गौर, पथरा, महम्दपुर, मिठुअर्वा, मर्यादपुर, सरमुजुवा, मलोहियालगायत गाउँमा डोम समुदायको बसोबास छ । डोम समुदाय विकास केन्द्र रौतहटका पूर्वअध्यक्ष विजय मालीले आफ्नो समुदायमा सानैमा विवाह हुने र बच्चा जन्माउने समस्या रहेको बताए । ‘उमेरै नपुगी विवाह गराइदिने परम्पराले पछि आएर ठूलो समस्या भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय उमेर नपुगी विवाह गर्न हुँदैन भन्ने चेतना भए पनि उमेर ढाँटेर र लुकाएर गर्दै आएका छन् ।’
प्रकाशित : असार १६, २०७७ ०९:१३